Ahoana no handoavana ny vorombola ao an-trano - Poultry farming - 2019
Angamba, tsy misy olona iray tsy miraharaha ny hakanton'ireo aviavim-be avonavona ireo miaraka amin'ny mpankafy mahafinaritra ao ambadiky ny lamosiny. Saingy ny zavatra iray tokony hankafizo azy ireo amin'ny lafiny iray, ary ny iray hafa - ny hiditra amin'ny fambolena.
Ny zotom-po amin'ny fitrandrahana trano fisakafoanana dia mameno ny fanontaniana fototra hoe "Nahoana?". Miharihary ny valiny: voalohany, fahafinaretana ho an'ny tenan-jaza no ao an-trano; Faharoa, io no hena sy atody mahavelona indrindra; Ary fahatelo, fahafahana izany.
Noho izany dia efa ao an-tokotaninao ny vorona mahagaga. Andao hiezaka hamantatra ny fomba entin'ny fikarakarana ny vorombola amin'ny fikarakarana sy ny sakafo ary ny zavatra tokony ho fantatry ny tompon-trano rehetra.
Poultry fanorenana sy fiarovana amin'ny biby mpiremby
Famaritana ny vorona paradisa
Ny tontolo voajanahary voajanahary ao amin'ny Peacocks dia Azia Atsimo, saingy miaina manerana an'izao tontolo izao izy ireo, na dia any amin'ny faritra faran'izay mangatsiaka indrindra any Kanada aza. Ankoatra izany, any amin'ny firenena maro, ny vorona dia miankohoka ho fahagagana mahatalanjona amin'ny anganongano, angano, anganongano populaire. Any India, ny vorombola dia heverina ho vorona nasionaly ary asongadin'ity fikambanana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny natiora ity. Ny mari-pamantarana famantarana ny pao-lahy dia ny fivoarana manosika ny tendron-tsofa ambony amin'ny rambony, izay, miaraka amin'ny volo madinika, dia mamorona ny rambony. Noho ny felam-piravoravoana mamy sy ny rambony maivana amin'ny "maso" manokana, ireo vorona ireo dia heverina ho tsara indrindra amin'ny akoho rehetra.
Anisan'ny fianakaviana Fazanov izy ireo. Ankehitriny dia manavaka karazam-borona paradisa roa ny zoologists: ny paka maitso (manga matevina) ary ny pine iraisana (Indian). Raha eny, dia hifampiresaka bebe kokoa ny farany, satria izy no lehilahy afaka nahazo toky.
Fantatrao ve? Hatramin'izao, mbola mistery ny mpahay siansa eto an-tany, ny tsiambaratelon'ny lava fanindroany amin'ny vorona. Tamin'ny taonjato faha-19, Charles Darwin dia nanandrana ny hanazava ilay tranga tamin'ny fomba mahazatra voajanahary mahazatra, fa ny teoria dia tsy namorona na dia taorian'ny nanampiany aza fa resaka momba ny firaisana ara-nofo izany. Tamin'ny taonjato faha-20, nanambara i Amots Zahavi fa ny trangan'ny poti-pidinina dia mitoetra ao amin'ny mari-pahaizana marina momba ny fahaizany, mifanohitra amin'ny tadin'ny rambony. Voalaza fa ny lehilahy matanjaka indrindra ihany no afaka mandany fotoana sy hery hananana lavaka lava sady mikarakara vehivavy. Na dia eo aza ny fikarohana lalina dia tsy tonga tamin'ny famaranana iray ny mpahay siansa.
Vehivavy faran'izay kely kokoa sy manetry tena kokoa noho ny lehilahy. Ao anatin'ny fanontaniana mahakasika ny habetsaky ny paozy, ny fitondran'io vorona io koa dia manao ny anjara asany. Ny weight dia tokony ho 3-4 kg. Manana rambony lava kokoa izy ireo, ampahany maitso amin'ny tendany sy volon'ondry volom-bolamena matevina eo amin'ny elatra sy aoriana. Ny halavan'ny vatany dia manodidina ny 95 cm. Ny halavany, fa tsy ny rambony, dia mahatratra 100 ka hatramin'ny 150 santimetatra, miaraka amin'ny rambony - 3 metatra. Ny elany dia fohy, ny tongotra dia avo ary ny halavany amin'ny halavany. Ny lamosin'ny lamosina, ny loko volomparasy, miaraka amin'ny marika mainty sy varahina.
Ireo dia vorona nanorina mafy, mavesatra hatramin'ny 4-6 kg, miaraka amin'ny lava lava, loha kely, izay misy tsiranoka manga miavaka amin'ny volom-borona mainty mitam-basy. Ny tasy fotsy eo ambonin'ny maso ary ny fotsy fotsy amin'ny endriky ny famantaranandro eo ambany maso dia miforona amin'ny hoditra mangatsiaka. Eo amin'ny sisin'ny tendrontany ambony loko manga sy manga.
Ny rambon'ilay vorombola dia mavo maitso miaraka amin'ny volon'osy maitso manga sy manga, ary manana elatra 20 fotsiny. Saingy ao anatin'ilay fiaraha-miorina amin'ny fiaramanidina efa ela, izay misy volom-borona mihoatra ny 200, dia misy mpankafy tena mahavariana.
Amin'ny haavon-drivotra, ny haavony dia avo lenta, ary ny sakany dia 2,5 m.
Fantatrao ve? Ny Indian Peafowl no iray amin'ireo lehibe indrindra sy sarotra indrindra amin'ny solontenan'ny fianakaviana Fazanov.
Ny lahy dia tsy maintsy manana tongotra eny amin'ny tongony. Miseho izy ireo, toy ny rambony manjavozavo, amin'ny herintaona ihany ary mivoatra hatramin'ny faha-efatra taonany. Ny vehivavy dia mitaiza irery ny zanany, ary mandihy ireo lehilahy mandra-pivalo ny rambony. Amin'ny fianjerany, manomboka mihetsiketsika ny vorona.
Any an'ala dia mivelona anaty ala ny alam-biby any anaty ala mando sy maina, ary mipetraka koa eo akaikin'ny fonenan'ny olona, ​​izay misy sakafo sy rano. Mamelona ny voankazo, voamaina, rembiny amin'ny androngo, bibilava kely ary avonavona.
Ny fitarainan'izy ireo mafy mandritra ny vanim-potoanan'ny fitsangatsanganana dia mamela mora amin'ireo mpiremby. Ny mpahay siansa dia manavaka ireo karazana vary 13 hafa, anisan'izany ireo 6 mampiahiahy. Ny famonjena ireo vorona ireo dia aleony mandositra ary tsy mitsangana velively any amin'ny lanitra. Mahagaga fa ho an'ny roost izy ireo dia miditra anaty hazo avo. Roosters dia mahazo harem-borona 5 mianatsimo. Betsaka no liana amin'ny habetsahan'ny taona iainan'ny vorona. Momba an'io lohahevitra io, efa ela ny mpahay siansa no niady hevitra. Ankehitriny dia misy ny fiheverana fa afaka miaina mandritra ny 15 taona eo amin'ny toetry ny tontolo voajanahary ny vorona paradisa, raha toa ka ao anatin'ny fahababoana dia 23 taona ny fahanterany.
Tandremo ny pao eny an-tokontany fa tsy sarotra kokoa noho ny akoho. Mahafinaritra azy ireo ny olona, ​​tsy dia miezaka loatra ny fitomboan'ny toe-pahasalamana sy ny sakafo, tsy dia marary, mora foana ny mangatsiaka sy ny orana.
Any amin'ny ririnina mafy dia mila hazo fisakafoana hafahafa ny vorona, ary amin'ny antoandro dia mbola mandeha any amin'ny aviary izy ireo. Amin'ny volana mafana dia mandany ny alina any ivelany izy ireo mandra-pahatongan'ny fifamoivoizana, noho izy ireo tia ny mianika hazo. Noho izany dia ilaina ny mikarakara fisiana aviary, barnea ary bozaka miavaka.
Azo atao ny mamafy ny ampahany amin'ny faritra misy ahitra maitso izay ho toy ny kijana ho an'ny biby fiompinao. Ilainao koa ny zorony amin'ny lavenona izay handroahana ny vorona.
Ny manodidina ny trano iray ao anaty tokon-koditra, ny akoho, ny ducks dia tsy azo ekena. Ny Peacocks dia tsy manaiky ny vahiny ao an-tokantranony ary haneho ny herisetra azo antoka fa afaka mamono hatramin'ny fahafatesana aza izy ireo.
Ny fikojakojana ny vorombola eo amin'ny tavy dia mitaky fikarakarana, na inona na inona ny feon'ny vorona. Ho tian'izy ireo, ankoatra ny efitra fisakafoanana sy ny fialofana, fialofana kely misy hazo na hazo izay handany ny alina mandritra ny fahavaratra ary hafenina amin'ny masoandro sy ny orana.
Ao amin'ny andian'omby dia tokony ho vavy vavy 3-4 no isaky ny lahy. Manomboka mihazakazaka izy roa taona. Ho an'ity vorona ity dia manamboatra akany.
Fantatrao ve? Ny volon'ireo zatovolahy iray nangonina taorian'ny taolam-paty dia azo amidy ho 40-80 dolara. Ho an'ny volon'ilay fotony fotsy, dia vonona handoa 140 euros ny Frantsay. Ny vidin'ny vorona iray, arakaraka ny lahy sy ny vavy, dia miakatra amin'ny 100 hatramin'ny 3000 dolara amerikana.
Ny famokarana peakokao ao an-trano dia manamboatra faribolana lavalava miakatra hatramin'ny 3 m avo, ary 5 m fara mandimby.
Ao aminy eo amin'ny ambaratongan'ny 2 m manangana polona ho an'ny roost. Afaka manompo toy ny sampana koa izy ireo. Eritrereto fa tsy misy vorona 6 (1 lahy sy vavy 5) afaka hivoatra tanteraka ao amin'io faritra io. Avy any avaratra izy ireo no mampiakatra avo roa heny ny halavany sy ny haavony, hatramin'ny 3 m eo ho eo. Ny fepetra ilaina ho an'ny trano dia varavarankely malalaka izay ahafahan'ny vorombola miditra ao anatiny.
Ary ny ampahany tsy tapaka amin'ny akanjo hoditra dia ny akanim-borona. Azo alaina avy amin'ny bokotra na sobika mpanangom-bokatra izy ireo, miaraka amin'ny fanantenana fa tokony hahatratra 60 santimetatra sy haavony ny haavony sy ny halaliny - 70 santimetatra. Ny ambany dia naparitaka amin'ny mololo na sawdust, toy ny ety ambany. Mamoaka tsara ny hafanana ary mitazona hafanana. Mba hisorohana ny fanoratana ny mikraoba sy ny bakteria ao anaty fery dia afafazo amin'ny vovobon-koditra eo amboniny.
Ny perisiana dia mifatotra eo amin'ny rindrin'ny efitrano eo amin'ny 1.5 metatra miala ny tany. Tokony ho eo amin'ny sisin'ny tongotr'ilay paingotra ny tongony, fa tsy 12 cm ny sakany ary 6 cm ny sakany.
Zava-dehibe izany! Ny voamaina dia tokony ho rectangular, fa tsy boribory. Izany dia ahafahan'ny vorona hanalefaka ny tongony amin'ny ririnina. Miondrika izy, manafina azy tanteraka amin'ny volony.
Ny lakandrano ho an'ny voromailala izay rakotra fasan'ny renirano iray 10 santimetatra, dia manapotipotika bitika kely ao aminy, manangana vava amin'ny lavenona. Ao ambadiky ny fefy sy ny akoho tongotra dia mametraka ireo mpihinana sy mpihinana azy izy ireo, mandrakitra ireo toerana feno sarotra aleha. Ny habetsaky ny sakafo sy ny rano dia tsara kokoa ny mametraka amin'ny rindrina amin'ny fahafahana mameno azy ireo, tsy miditra ao anatiny. Ataovy azo antoka koa fa tsy manala sakafo ny vorona, aza manosotra azy amin'ny rano.
Ao an-trano, ireo mpamatsy dia manao ny hazo maina tsy misy lo. Ny haavon'ny rindrina dia tsy tokony hahamay kokoa noho ny 10 mm, ary ny haavon'ny trano dia tokony hahitana ny fitaovana tsy misy fitaovam-piadiana, ary koa tsy avela hianjera ao anatiny. Ataovy azo antoka ny manapaka ny zana-ketsa henjana mba tsy hahavery ny vorombola.
Amin'ny ririnina, raha mihoatra ny 10 ° C ny hafanana, dia mihidy ao anaty trano ny omby. Amin'ny mari-dratsiny kokoa (hatramin'ny -15 ° C) dia mihamafana ilay efitrano. Amin'izay lafiny izay dia afaka mampiasa menaka na radiatora solika ianao.
Mba hiarovana ny trano amin'ny mpihaza, mikarakara ny tanjaky ny rindrina sy ny aviary. Ny fefy dia matetika vita amin'ny metaly matevina maharitra, izay tsy afaka manapaka ny paikan'ny alika lehibe. Ambonin'izany, manangana fialofana hiarovana ny andian'omby amin'ny fanafihana amin'ny saka. Ataovy antoka fa ny amboahaolo sy ny ratin-tsakafo dia tsy afaka mihodina sy mivonto ao anatiny. Ny fikarakarana manokana dia zanaka.
Ny fahantrana ao amin'ny vorona paradisa dia manomboka amin'ny roa na telo taona, raha manomboka manidina ny voromailaky ny voromailala, ary mitombo ny rambony amin'ny lehilahy.
Fantaro fa ny vorombola dia nanomboka ny vanim-potoanan'ny fotoana, dia mora. Izany no ampahafantaran'izy ireo ny feo mahery. Ary ny horakoraka dia afaka mihiaka ny maraina ka hatramin'ny alina. Ny vorona dia tsy ho henon'ny mpifanolo-bodirindrina aminao, fa koa amin'ny distrika iray manontolo ao anatin'ny oram-baratra dimy kilometatra. Ny lehilahy, izay mikiakiaka indrindra dia manana feo ratsy sy tsy mahafinaritra. Raha ampitahaina amin'izy ireo, ny vehivavy dia mihazakazaka be dia be, ary matetika ny tazo dia mangina mandritra ny 2-3 taona.
Ny fotoam-bary dia maharitra hatramin'ny fiandohan'ny lohataona hatramin'ny fararano. Matetika izy ireny, toy ireo mpihantoka, dia mamorona pairaly maharitra izay tsy atolotsaina, tsy mila ilaina. Ho an'ny taranany, ireo solontena tanora avy amin'ny andiany dia tavela, miaraka amin'ny felam-bintana tsara. Aza mifidy vehivavy ho toy ny renim-pianakaviana, raha mbola matroka izy, mihintsana volon'ondry.
Alohan'ny hananganana, ny vorondolo dia manao dihy eo anoloan'ny vehivavy mandritra ny 20 minitra. Mandritra izany fotoana izany dia manosika mafy ny rambony ary manondrika ny elany eo amin'ny tany indraindray. Amin'ny alàlan'ny masculine sy volom-borona miaraka amin'ny volom-bolo, ny tovolahy dia mampiseho ny mety hisafidianana azy.
Fantatrao ve? Tany amin'ny Moyen Âge, ny kiran'ny Eoropeana dia nitondra ny "Peacock" ary nanamboatra ny satrony tamin'ny volom-borona avy amin'ny rambony. Ny Vikings dia nihevitra izany ho voninahitra raha naverina tao am-pasana ny "maty": ilay tovovavy efa maty dia nomena anarana mahatalanjona isan-karazany, anisan'izany ny fanasitranana. Ary i Cardiniana Woolsey tamin'ny 1526 dia namoaka adihevitra lehibe momba ny hoe voromailo na vorona ao an-trano na vorona.
Pava - rambony ratsy, fa tena reny be fiahiana. Ny familiana zanaka dia indroa isan-taona, ary mihiaka, miankina amin'ny toetr'andro, matetika amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona hatramin'ny faran'ny fahavaratra. Afaka mamela ny atody manerana ny faritra voatokana ho azy ny vehivavy. Mba hisorohana izany tsy hitranga, mikarakara fialambolamena feno akoho malefaka.
Ny haben'ny atodin'ny vorombola dia mitovy amin'ny turkey. Izy ireo dia atody kesika bebe kokoa, miloko marevaka miaraka amin'ny alokaloka mena midorehitra, anaty teboka maizina. Rehefa mipoitra ao anaty akanim-borona ny 5-7, manomboka mihetsiketsika ny zazakely. Ny fahasamihafana eo amin'ny fiterahana dia voamarika rehefa manjary lava ao amin'ny akaniny ny pava.
Ny mpivarotra efa manana traikefa dia manangona ny atody isan'andro ary manamboatra ny reniny rehefa mihinana ny atody 20 mahery, satria ny vehivavy tsirairay dia afaka mamokatra atody 30. Noho izany antony izany, dia dika vaovao ihany no raisina, izay tsy mihoatra ny 10 andro. Raha eny, dia mety halefa any ambany kirihitra sy kintana izy ireo. Ny zezi-pahasalamana izay lavo amin'ny tany dia tsy mety intsony amin'ny famotehana.
Ny fihadiana ny atodin'ny vorombola dia maharitra 30 andro. Ho an'ny fampidiran-draharaha mahomby dia tokony ho 28-30 degre Celsius ny mari-pana ao amin'ny tranombokim-bovoka. Ny felam-boninkazo dia rakotra matevina matevina, avy hatrany rehefa avy teraka dia mihetsika tsara izy ireo. Tahaka ny akoho, manaraka ny reniny na aiza na aiza izy ireo, indraindray dia mianika eny an-damosiny izy ireo ary "mandeha" mankany amin'ny zoro kanto na sakafo. Ny zana-trondro tanora dia hahatratra ny fahamatorana ara-nofo raha tsy efa 3 taona.
Ny saka mpihinana dia marefo amin'ny fiovan'ny hafanana, ary matahotra ny hatsiaka sy ny masoandro. Mampidi-doza ny miaro azy ireo amin'ny olon-dehibe. Noho izany, miompana amin'ny reniny izy ireo dia alefa any amin'ny aviary hafa. Ny kalitaony dia manana anjara toerana manan-danja eo amin'ny fampandrosoana ny taranaky aviavy.
Zava-dehibe izany! Andro vitsy mialohan'ny hanosehana ireo akoho kely dia tokony hokarakaraina amin'ny fantsom-pandehanana ny trano fitehirizam-bary ary misy fitaovana fanatontosana.
Ataovy azo antoka fa efa voaisy tombo-kase ny lavaka rehetra amin'ny aviary sy ny tranom-pasika, ka tsy mampidi-doza ny fisotroana sy ny sakafom-pihetseham-bozaka, mba hananany rano sy sakafo foana.
Ny efitrano dia tsy maintsy tsara ventilation sy hafanana. Amin'ny herinandro voalohany dia tokony ho 36 ° C ny mari-pana. Rehefa mandeha ny fotoana, dia mety hihena amin'ny 2-3 degrees izy, ary aorian'ny volana vitsivitsy dia azo fongana tanteraka izany.
Ao anatin'io andian'omby io dia mamela hikorontana matanjaka, marevaka, miorina tsara sy mora izy ireo miaraka amin'ny rojo fanasitranana, izay mamaly tsara ny tavoahangy mazava eo amin'ny tany.
Ny roa herinandro voalohany, ny fiheverana manokana dia omena ny famokarana ny zana-kazo. Ny Peacocks dia samy hafa fiteny am-pitiavana. Raha marina izany, dia ilaina ny manome azy ireo hanana toerana malalaka.
Amin'ny lohataona, ny zana-tohatra tanora dia mamboly eny an-dalambe, izay ahafahan'izy ireo mitombo haingana. Zava-dehibe ny mikarakara fialofana avy amin'ny orana sy ny masoandro. Azonao atao ny manavaka ny firaisana ara-pananan'ny akoho kely 10 andro aorian'ny fiposahan'ny elatra. Amin'ny lehilahy, dia mofomamy misy takaitra vita amin'ny takaitra izy ireo, ary amin'ny volony dia mavo izy ireo. Ireo zana-tovovavy efa lehibe dia nozaraina indray: ny sasany dia voafantina amidy, ny sasany dia novonoina.
Ilaina ny famokarana peacocks ao amin'ny ririnina. Ny fotoana tena tsara dia ny volana Mey ka hatramin'ny Jolay.
Mandritra izany fotoana izany, ny pavchata dia tokony hampifanaraka amin'ny fepetra vaovao ary hanaraka ny andro mangatsiaka.
Raha nividy ravina tamin'ny ririnina ianao, karakarao ny fanamafisam-peo tsara ny trano fisakafoanana, satria tsy avelan'ny vorona kely paradisa mangatsiaka ny hafanana, ny hafanana ary ny hafanana. Mitandrema: mandritra ny vanim-potoana dia sarotra ny manavaka vorona marary avy amin'ny salama iray.
Rehefa mividy akoho dia tandremo ny tongony, ny orona ary ny maso. Misafidiana pensilihazo tsara eo amin'ilay foko. Raha ny fitsipika, madio izy ireo, miaraka amin'ny paompy mavokely, tsy mena ny masony, baoty madio ary ny tapany aoriana, volo mamirapiratra. Nomena safidy malalaka, mavomavo marefo.
Ity lafiny iray ity dia mitana andraikitra goavana eo amin'ny dingan'ny fampiroborobona vorona iray any an-trano. Ny sakafo voahevitra tsara dia tsy tokony hanome fahafaham-po ny filoham-pisotro ho an'ny sakafo, fa manome azy ireo ihany koa ny zavatra ilaina sy ny fifanakalozana herinaratra. Ankoatr'izany, ny sakafo dia tokony ho akaiky araka izay azo atao any amin'ny tontolo voajanahary voajanahary izay nahatongavan'ireo vorona hafanana. Ny fihenjanana sy ny fifadian-kanina dia manimba ny fahasalamany.
Raha manomboka amin'ny pavchat hatramin'ny 20 andro, dia manamboatra plastika plastika na taratasy matevina. Aorian'izay, dia ampianarina ny zazakely mba hihinana sakafo tsy tapaka.
Vantany vao teraka, ny pavchat dia omena amin'ny atody mafy nopotehina. Ny tahan'ny homamiadana tsirairay dia eo amin'ny 4-5 g eo ho eo. Azo atao ihany koa ny fofomamy maitso, ampemba, varimbazaha varimbazaha, lafarina katsaka, voanjo voatoto, greens, ary voankazo maranitra. Mba hisorohana ny parasy, dia asaina manodina ireo akoho miaraka amin'ny volon'ireo tongolo mainty. Taty aoriana izy ireo dia omena trondro na harona an-tanety.
Ny sakafo dia tokony homena amin'ny ora roa tolakandro amin'ny endrika fototra.
Ny akoholahy isan'andro dia tsy maintsy omena vitaminina vitaminina avy amin'ny alfalfa voapetaka, haran-dranomasina ary karoty.
Ny isam-pamokarana hatramin'ny volana iray isaky ny vanim-potoana dia miova tsikelikely isan'andro. Hatramin'io vanim-potoana io, dia alefa amin'ny zaza vao teraka mba hikarakarana sakafo ho an'ny akoholahy akoho ary omena kankana kely. Ary iray volana sy tapany aorian'ny nahaterahanao, dia afaka manolotra varimbazaha varimbazaha, varimbazaha, vary orza ianao. Amin'ny roa volana aorian'ny taom-piraisana, dia mihinana sakafo matavy mitovy amin'ny olon-dehibe. Tia mihinana voankazo, voankazo izy ireo.
Amin'ny tapany voalohany amin'ny taona dia tokony hifangaro zava-mahadomelina tsy tapaka ho an'ny coccidiose ny zazakely. Aza adino ny manova ny rano ao anaty tavin-koditra intelo isan'andro. Tokony ho madio foana hatrany izy io.
Zava-dehibe izany! Ny zana-kisoa tanora amin'ny fampandrosoana manontolo dia manan-danja mba hanomezana vahana mifangaro. Ny fanovana ny fihinana dia mihamitombo, fa tsy manala ireo vokatra efa fantatra. Raha manova ny zava-drehetra amin'ny fotoana iray ianao dia mety ho marary sy ho faty ilay vorona.
Ny famokarana ireo voromailala lehibe dia miankina amin'ny taonany sy ny vanim-potoany. Na dia misy aza ny fiheverana momba ny karazan'io vorona io, dia tokony hisy fakan-kazo, voankazo, voankazo, serealy ary mofo ny fialan-tsasatra isan'andro. Ny fiheverana manokana ny famokarana ireo paiso dia tokony aloa amin'ny fararano-ririnina. Ny dose isan'andro dia toy izao manaraka izao: 50 g voankazo, voamadinika, voankazo sy legioma, 40 g of oats sy kalsa alfalfa, 90 g ny menaka manitra.
Ny tantsaha sasany dia mampifangaro ny singa ao anaty voankazo misy poti-tsaka izay somary sira. Amin'ny ririnina, ny ala dia nosoloina legato, trombo ary legioma maina. Amin'ny maraina dia aoka ho azo antoka fa manolotra voa voajanahary. Etsy ankilany, ny fahasamihafan'ny voankazo, ny tsara kokoa ny pao dia hijery.
Нельзя давать павлинам горячий или сырой картофель. Все овощные и фруктовые компоненты, а также травы изначально скрупулезно моют, затем просушивают. На пользу пойдут только свежие ингредиенты. Недопустимо попадание в пищу зерна с цвелью. Alohan'ny hanompoany, ny ahitra dia voasarona tsara, voasasa amin'ny rano ary maina ao anaty lafaoro na amin'ny masoandro.
Ataovy azo antoka fa tsy misy ny sisa tavela amin'ny fitahirizana sakafo. Azo alaina izy ireo, raha tsy izany dia mety hihinana vokatra azo avy amin'ny hazon-kena ireo vorona ireo, izay efa nanomboka ny dingan'ny fivalanana. Ny famonoana miomana efa voaomana dia azo alamina ao anatin'ny vata fampangatsiahana mandritra ny telo andro. Amin'ny lohataona dia azo atao ny mangatsiaka, ary amin'ny ririnina dia tiana ny hahatongavana amin'ny sakafo ao amin'ny efitra fisainana. Ho an'ny vorona miditra amin'ny vatana mpitrandraka harena an-kibon'ny tany, dia ilaina ny mametraka fitoeran-jiro misy kodiarana sy koveta ao amin'ny aviary.
Ny vanim-potoan'ny sakafo dia manomboka amin'ny maraina sy amin'ny hariva, ary mandritra ny famonoana sy fanenanam-bozaka, dia omena sakafo fanampiny ny fiaraha-misakafo. Rehefa manomboka ny vanin-taonany ny vorona, dia mampitombo ny isan'ny atody, ronono sy cheese amin'ny sakafo. Mandritra ny andro, misy vorona salama dia mihinana sakafo 600 gr, ary 400 g ny ahitra.
Ao amin'ny sakafo voalohany dia voankazo malefaka ny voany, ary amin'ny faharoa dia manolotra sira mifangaro.
Raha tsy milamina ny faran'ny andro, dia manampy volo izy ireo mandra-pahatongan'ny maraina.
Zava-dehibe izany! Hatramin'ny mbola kely, dia mila mahazatra azy amin'ny fotoana manokana ny voanjo.
Ny Peacocks, toy ny akoho, dia mety ho voan'ny karandohan'ny karandohany. Ny parasy dia tsy ny tsinay fotsiny amin'ny vorona, fa ny taova hafa ihany koa. Ny aretina dia afaka miseho amin'ny fomba samihafa. Mijere akaiky kokoa: mila ny fanampianao ianao raha very ny paozika ary miharatsy ny bika aman'endriny. Vetivety dia very maina ny vorona marary, manomboka mandalo mivalona izy ireo, mihena ny heriny. Miaraka amin'ireo soritr'aretina ireo dia misy ny fihenan'ny hery fiarovan'ny hery fiarovana, izay voan'ny aretina mahery vaika kokoa.
Ny fitsaboana dia manomboka avy hatrany taorian'ny nahitana ny antony mahatonga ilay aretina. Ny zazakely dia manana risika manokana, satria amin'ny vanim-potoanan'ny taonan'ny vorona dia manapotika ny tsy fahampian'ny otrikaretina isan-karazany. Ny tsimok'aretina dia afaka miditra ao amin'ny vatana miaraka amin'ny sakafo mahasalama sy ny rano maloto, ary amin'ny dingan'ny fahalalahana. Izany no antony tokony hijanonan'ny vorona ao amin'ny aviary, madio madio ary manara-maso ny fahadiovan'ny trano sy ny tafo mba handraisana rano sy sakafo. Ankehitriny, ny indostrian'ny seha-pihariana dia manolotra fanafody maro isan-karazany. Inefatra isan-taona dia tokony ho fepetra fisorohana ny fihanaky ny vorona. Ny zava-mahadomelina "Fenasal", "Bitionol", "Ivermectin", "Fluenvet" dia efa nanaporofo tsara. Mifangaro amin'ny sakafo izy ireo araka ny dôsina voatondro ao amin'ny torolàlana. Vakio tsara ny fanoloran-kevitr'ireo mpamokatra zava-mahadomelina, rehefa manisa ny doka, dia tariho amin'ny lanjan'ny vorona velona.
Ny tantsaha sasany dia mampiasa ny vokatra natao hanesorana kankana amin'ny biby sy kisoa. Saingy raha ny marina dia tsara kokoa ny mijery veterinera iray.
Ry voromailala tia, avelao izy ireo tsy ho enta-mavesatra ho anao, hiaro azy amin'ny alahelo, ary ireo vorona paradisa dia hisaotra anao.
Ary tsara tarehy sy mahafinaritra - karazana tomato Garden Pearl
Sakafom-boankazo ao an-trano: fizarana tsiambaratelo
Plant unpretentious - Dracaena Sander (Spiral Bamboo, Sanderiana)
Fantatsika ny antony mahatonga ny ravin'olombolahy maniry manodidina ny zana-ketsa ary mandray fepetra hiadiana amin'izany.
Voninkazo mamy - orchid cymbidium. Famaritana ny zavamaniry sy ny fitsipiky ny fikarakarana azy
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny fiompiana zana-trondro ao an-trano